Izixhobo zokuCoca iiMoto ezingachukumisi | Ukuthengiswa kweeNkcukacha ngeZinto zeVenkile ethengiswayo
Ikhaya / iimveliso / IiNkonzo zokuhlamba iimoto
Ukucoca imoto ngaphandle kokuchukumisa
Ngaba ucinga ukuba ukuhlamba imoto izinto ezilula?
Xa usela ikofu okwethutyana, imisebenzi yokucoca imoto iphela! I-OPS engachukumisiyo yokuhlamba imoto yokucoceka ngaphandle kwemoto, isuse ngokufanelekileyo ukungcola kwemoto, ukungcola kwendlela, udaka, i-shellac, njl. Njl. amaxesha. kodwa uya kufumanisa ukuba ukucoca imoto kuyahlekisa!
♣ Kususa i-Stuck-in insects, i-Resin Trex droplets.
♣ Ingubo ecacileyo igqiba ukhuseleko.
♣ Kufanelekile ukucoca zonke iintlobo zezithuthi.
♣ Ngokubanzi isetyenziswe ngesandla okanye inkonzo yokuhlamba ngokuzenzekelayo.
Yintoni i-carless touch wash? Ukugqibelela ngokucoca isithuthi esimdaka kangaka ??
I-OPS ixininisekile Ubuncwane beCar ilungiselelwe ngokukodwa iNkqubo yokuhlamba iimoto,, Ukuhlamba izandla ngeenyawo, ukuhlamba imoto ngokuzenzekelayo.
Yeyiphi efanelekileyo ukucoca zonke iintlobo zezithuthi kwii-arhente zokucoca iimoto kunye nesikhululo senkonzo yemoto.
Olona ncedo lwento leyo alunakuchukumisa, ngaphandle kokucoca. Akukho mfuneko yokuhlamba kuqala kunye nesiponji isula. Gcina amanzi kunye neendleko!
Umsebenzi wokucoca kulula kakhulu kwaye kulula ukwenza. Sitshiza nje i-shampoo yemoto engachukumisi kwaye uyihlambe nge-Pressure washer.
Musa ukupeyinta ukupaka nasiphi na isithuthi. Ngokudityaniswa nokubengezela ngenxa yomgubo kufakwe i-wax.
I-Alkalescent materail, ireyithi ye-PH ngu-8.5, uphumelele u-SGS, TUV, MSDS, isitifiketi se-CE. Yiyo loo nto kufuneka ukhethe izixhobo zethu zokuhlamba iimoto!
Yimiphi imveliso egqibeleleyo yempahla yokucoca imoto?
♦ Itholakala kwindleko yokuhambisa i-powder, elula kwaye engabizi, isikhwama esinye 500g, sinokuhlamba i-40cars.
♦ Amanzi asindiswe ngaphezu kwesigamu. Sebenzisa nje nge-30-40 ilitha ngamanzi ngemoto, Maximum ugcine amanzi!
♦ Ucofa kuphela kwaye uhlambulule kakuhle. Akukho mfuneko yokusula, umntu omnye uthatha imizuzu eyi-3 yokucoca imoto enye.
♦ Uqoqosho, kulula ukuyisebenzisa kunye kususa ngokufanelekileyo ukungcola okugqithisileyo, izithuthi zihamba kunye nezinye izinto ezingcolileyo.
♦ Izinto ezinqabileyo zokuhlamba imoto ph zihlambulula ngokulula kwaye zihambe indawo ebonakalayo ikhanya kwaye ihlambulukile.
♦ Ishiya iglasi ngokucocekileyo kwaye ibuye isuse iinki ezingcolileyo ezijikelezayo kwiifestile zemoto.
♦ Ukuhlamba imoto ukuchazela izinto ezikhuselekileyo kukhusela ukukhanya kwelanga elibomvu kunye nemozulu eyingozi, okwenza imoto ikhanye entsha.
Indlela yokuhlamba imoto ngemveliso yokucoca kwendalo?
♥ Dissolve ipakethi ye-OPS yokungenagxininisa i-powder car wash powder kwi-50kg amanzi enebhakethi (i-dilution ratio 1: 80-120)
♥ Ngaphazamiseka ukupakisha i-liquid (ifolk-ifom) kwibala lemoto kunye neevili ezine ezinevili. Uya kugqiba ukusebenza malunga ne-3o imizuzwana.
♥ Hlanganisa isithuthi esivela phezulu ukuya phezulu (ubuncinci ukunyanzeliswa kwamanzi kugcine 60MPA)
♥ Emva kokuhlambulula, masinyane umise isithuthi ngesilu sokumisa.
Uyabona, kukulungele ukunika impahla yokuhlamba imoto! Xha ga mshelana!
Ukuhlamba iinqwelo ezihamba phambili kwimoto yokuhlamba imoto ngokuzenzekelayo
♦ Ukukhupha ipakethe ye-OPS yemoto yokuhlamba imveliso (powder) kwi-2kg amanzi ukufumana i-2.5kg yokuhlamba imoto
(Phakamisa ukusebenzisa i-tepid kumanzi afudumeleyo kwiinyanga zasebusika unempembelelo engcono).
♦ Emva koko ubeke ipompo elinganayo malunga ne-4% usebenzisa i-liquid wash wash.
♦ Uchithe umbane wokuhlamba imoto ngokulinganayo xa isithuthi sishayela kwisitya sokuhlamba.
♦ Lungisa umbane wokuhlamba imoto kwi-60kg.
♦ Emva kokutshatyalaliswa, ngokukhawuleza imile isithuthi esinesiliti esikhulu.
Kuphawulwa: Ukulinganisa okwenene ku-1: 125
Kanye kunye ne-car powder powder etholakalayo kwivenkile yokucoca ichanekileyo (inkqubo efanayo ne-automatic car wash)
Yintoni ukusetyenziswa kwezi powder?
Ukuvaswa kweMoto ngesandla • Ukuzihlanjwa kweZithuthi ngokuZenzekelayo • Ukucoca uxinzelelo oluphezulu
Ngaba ujonga umenzi wemveliso yokuhlamba iimoto onokuthenjwa? Silapha!
Iinkonzo zokuhlamba iimoto Iinkcazo zeenkcukacha
Price US $ 2.00-2.50 500g / Bag (FOB Ningbo / Shanghai)